IPsychology yeemilo kuyilo lwegraphic | Abadali be-Intanethi
IPsychology yeefom kuyilo lwegraphic
Kwilizwe loyilo sinokudibana phambi kwamehlo ethu iimilo ezahlukeneyo kunye nemibala, kodwa asisoloko sisazi intsingiselo yento nganye kwezi, ekubeni kuxhomekeka kwindlela ezibekwe okanye eziyilwe ngayo zinokunikela intsingiselo ethile. Xa uphuma ngomnyango wendlu yakho, ngaba uye wema wazibuza ukuba ezi milo zisingqongileyo zithetha ukuthini?
Izivuseleli esizibonayo ngezivamvo zethu kubo bonke ubomi bethu zineempawu ezifanayo kwaye oko kunjalo ubambeke kwingqondo yethu kwaye ukhunjulwe.
Ngoko ke, umbuzo ovelayo kukuba ngaba sinokubona zonke iintlobo zeefom Ngaba kukho isayikholoji yeefom? Ewe, impendulo ngu-EWE ovakalayo.
Njengoko sele sihlomle, iimilo, eziyenye yezi zivuseleli besithetha ngazo, zinefuthe elithile kumntu ngamnye. Ngenxa yesi sizathu, xa usenza naluphi na uyilo, oku kufuneka kube khona. ukwenza isayikholoji.
Indibaniselwano yeemilo kunye nezinye izinto ezibonakalayo zikhokelela ku-a ukwakheka apho uvakalelo lunikwa khona, umyalezo ogqithiselwa kuluntu kwaye luluntu oluthi, ngokubona kwabo, lunike indibaniselwano exeliweyo isiphumo esihle okanye esibi.
Kwinqaku lanamhlanje siza kungena kwi isayikholoji yeefom kwihlabathi loyilo lwegraphic kwaye ufumanise ukuba inkqubo yokuyila ukwenza amava alungileyo omsebenzisi.
1 Yintoni ipsychology yeefom?
2 Intsingiselo yeemilo zejometri
2.4 Imigca ethe tye
3 Intsingiselo yezinye iifom: eziphilayo kunye ne-abstract
4 IPsychology yefom kuyilo lwegraphic
Yintoni ipsychology yeefom?
Xa umyili enikwa ingcamango yeprojekthi, umele anikele ingqalelo kwiifomu aza kuzisebenzisa, ekubeni, njengoko sele sitshilo, nganye kuzo inentsingiselo eyahlukileyo emva kwayo nentsingiselo yayo. impembelelo evelisa kumntu ngamnye ebantwini.
Ifomu nganye esiyaziyo namhlanje inokwabelwa iqela leentsingiselo, ekubeni ishiya umzobo othe ngqo ezingqondweni zethu nasengqondweni. indlela yethu yokuziphatha.
Umzekelo wale mpembelelo kuxa esixelela ukuba silizobe ilanga, uninzi lwethu lumele ngendlela engqukuva nemigca ethe tye efuzisela imitha yelanga. Kutheni le nto sinxulumanisa loo milo naloo nto?
Ukuphendula lo mbuzo yi-psychology yefom, eyona nto isixelela ukuba ifom nganye inika ingqikelelo kwaye yile ehlala ibambelele ezingqondweni zethu.
Emva kwabaninzi iminyaka yokufunda kunye nophando Ngabachwephesha, ekugqibeleni intsingiselo inikwe ukuba ifom nganye isenza sizive kwaye kweli nqaku siza kukubonisa yona.
Intsingiselo yeemilo zejometri
Xa sithetha ngeemilo, iingcamango ezininzi zinokufika engqondweni, kwaye eyokuqala yileyo iimilo zejometri, kodwa kufuneka ucinge malunga neemilo eziphilayo kunye nezingabonakaliyo.
Okokuqala siza kuyazi intsingiselo yeemilo zejometri. Zizokuqala ezifika engqondweni kwaye zakhiwe iipateni eziqhelekileyo kwaye kulula ukuzikhumbula.
Izikwere okanye uxande ngamanani amabini esiwajonga kakhulu kwimihla yethu. Kufuneka nje ujonge ngeenxa zonke kuwe, iindonga, umabonwakude, iingcango, iselula ... Ii-engile ezifanelekileyo kunye nemigca apho la manani akhelwe khona ahambisa uzinzo, ubudoda, amandla kunye nokomelela.
Unxantathu umele umzobo omkhulu eguqukayo, ivuselela amandla kunye namandla. Xa usebenza kunye nonxantathu kufuneka uthathele ingqalelo into ebaluleke kakhulu kwaye oko kukwenza isigqibo malunga nokuba ukhombe phi. Kuxhomekeka apho zikhomba khona, iya kusinika intsingiselo enye okanye enye. Ukuba sibeka unxantathu kwindawo ethe nkqo, ayikhokelela kwimvakalelo yokulinganisela, ngokuchaseneyo, ukuba sibeka i-inverted, isenza sibe nemvakalelo yomngcipheko, isilumkiso.
Ngomnye wamanani ejometri isetyenziswa kakhulu kwihlabathi loyilo, kunye neentlobo zayo ezifana ne-oval kunye ne-ellipse.
Isangqa sinxulunyaniswa nephakade kuba, njengoko sele sisazi, lo mzobo awunasiqalo okanye isiphelo, kunye nobunye. Idlulisela iimvakalelo ezisondeleyo kuba ingenawo ama-engile kunye neencopho, ngokungafaniyo neefom zangaphambili ezikhankanywe. Oku kungabikho besithetha ngako kuyanceda ukubanjwa nokukhunjulwa ngokulula. Ngokuqhelekileyo inxulunyaniswa nayo iimvakalelo zobunye, ukugqibelela kunye nokunyakaza.
Imigca ethe tye
Ukuba sithe isangqa sesinye sezona zibalo zejometri ezisetyenziswa kakhulu kwihlabathi loyilo, ukusetyenziswa komgca ochanekileyo kwinqanaba elifanayo.
Ngokuxhomekeke ekusebenziseni imigca singenza umyalezo omnye okanye omnye. Ukuba sifumanisa imigca ityekele, ivuselela imvakalelo yesantya, intshukumo. Kwelinye icala, ukuba sibabona beme ngokuthe tye, baya kusinika imvakalelo yokuzola, yokuzithemba. Kwaye ekugqibeleni, ukuba siyawajonga kwindawo ethe nkqo, idala amandla, anokuthi ayenze ibe nomtsalane ngakumbi, kwaye ikhuphe ibhalansi.
Abaqhelekanga ukubonwa ngokuqhubekayo kwihlabathi loyilo, kodwa xa besenza, kukumela i uhlobo. Zinxulumene nokukhula kobomi kunye nendaleko.
Umnqamlezo usisithethantonye ne ithemba nobuThixo. Zisenokusetyenziselwa ukuthumela umyalezo wenkcaso okanye wokuchaswa. Bacebisa iimvakalelo zempilo, ubudlelwane, ubumoya kunye nethemba.
Ayiyiyo enye yeefom ezisetyenziswa rhoqo kwihlabathi loyilo, kodwa xa zivela zongeza intsingiselo kuyo synergy, ubulumko kunye nobukrelekrele.
Intsingiselo yezinye iifom: eziphilayo kunye ne-abstract
Nje ukuba sazi kwaye sihlule amanani ejometri, siza kuchaza ukuba yeyiphi amanani aphilayo kunye ne-abstract.
Kwindawo yokuqala Amanani ezinto eziphilayo yile nto siyaziyo njengeefom zendalo. Ezi zikhuthaze amagcisa ahlukeneyo, abazobi nabayili banamhlanje. Inentsingiselo emele ngokucacileyo into kwaye ngaloo ndlela inike ubutsha kunye nobunye.
Ngokuphathelele iimilo ezingabonakaliyo zizisimboli okanye iimilo eziqulunqa izimvo ezingabonakaliyo. Inokufikelela kwinqanaba apho ingcamango emelwe ngendlela engabonakaliyo ingabonakali, ngoko xa usebenza ngezi fom, umele kuphela eyona nto iphambili.
IPsychology yefom kuyilo lwegraphic
Njengoko siye saphawula kulo lonke inqaku isayikholoji yefomu kuyilo lwegraphic ngundoqo kuba aba (abayili) ngabanxibelelanisi ababonakalayo. Banxibelelana ngomfanekiso kunye nokwakhiwa kwabo, kufuneka bacace kakhulu malunga nexabiso kunye neemvakalelo abafuna ukuziveza emsebenzini wabo, kuba zininzi izinto ezinokuphembelela imbono yabantu.
Ilogo ngundoqo kuyo nayiphi na inkampani, kufuneka hambisa kwaye udlulise umyalezo ukuba le nkampani isemva. Kule nto, isifundo kunye nokukhetha okuchanekileyo kweefom zoyilo lwayo kubaluleke kakhulu.
Kukwabaluleke kakhulu ukuba kuthathelwe ingqalelo ipsychology yendlela kwihlabathi le typography. Njengoko sonke sisazi, zininzi iifonti zokuchwetheza ezichazwe njengezi: i-serif, i-sans-serif, ibhalwe ngesandla kunye nokuhombisa.
Njengoko sele sitshilo, iifom ezixhomekeke kwindlela ezisetyenziswa ngayo zinentsingiselo enye okanye enye, kuba into efanayo iyenzeka nge-typography kwaye ukwazi ezi ntsingiselo kubalulekile cazulula iimilo zabalinganiswa babo, ukuba zinejometri ezininzi okanye iimilo ze-organic ngaphezulu, ngokuthe ngqo okanye ezigobileyo, njl. Kubalulekile ukuba ezona fom zibalaseleyo kwi-typography esizikhethayo zithathelwe ingqalelo, ke xa sikhetha enye, inceda umyalezo kunye nonxibelelwano olubonakalayo.
Ukusetyenziswa isayikholoji yefomu kuyilo lwegraphic iyimfuneko ukwenza isibheno, sigcine silula, musa ukusebenzisa iimilo ezininzi, dlala ngeemilo kunye neentsingiselo kodwa soloko unolawulo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » IPsychology yeefom kuyilo lwegraphic
Uzikhuphela njani iividiyo zeTik Tok ngaphandle kweWatermark